मानिस किन घुर्छ र यसको रोकथाम कसरि गर्ने ? - VOICE OF NEPAL
मानिस किन घुर्छ र यसको रोकथाम कसरि गर्ने ?
२६ चैत्र २०७५, मंगलवार २०:०४ 186 ??? ???????
घुर्ने समस्या भनेको त मानिसमा देखापर्ने अन्य समस्याहरु खुट्टा गनाउने, धेरै पसिना आउने, एलर्जी आदि जस्तै रहेछ । यस्तो समस्या केही मानिसलाई मात्र हुन्छ । करिब २० प्रतिशत मानिसहरुमा यो समस्या देखिँदो रहेछ ।
कस्ता मान्छे घुर्छन् त ?
यदि मानिसले सुत्नुभन्दा पहिले जाँडरक्सी खायो भने उसको जिब्रोको मोटाइमा केही हदसम्म बृद्धि हुन्छ । सुत्दा पनि त्यो जिब्रो अलिक पछाडि धकेलिन्छ । यसले श्वासप्रश्वास स्वतन्त्ररुपमा हुन सक्दैन । त्यही भएर रक्सी खाने मानिस धेरै घुर्छन् । गहिरो निद्रामा परेको बेला पनि कहिलेकाहीँ यस्तो हुने गर्छ । मानिस घुर्नुको अर्को कारण भनेको मानिसको घाँटीको टिस्युमा हुने बृद्धि पनि हो । विशेष गरेर मोटो मानिसमा यस्तो समस्या देखापर्छ । त्यही भएर दुब्ला मानिसका तुलनामा मोटो मानिस धेरै घुर्ने गर्छन् । रुघा लागेको वा पिनासको समस्या भएको मानिस पनि घुर्ने गरेका पाइएको छ । नाकबाट खुला रुपमा श्वासप्रश्वास हुन नपाएपछि यस्ता समस्याबाट ग्रसित मानिसहरु घुर्न थाल्छन् । कहिलेकाहीँ त नाकमा जम्ने फोहोरको कारणले पनि यस्तो समस्या देखा पर्छ ।
के घुर्नु नराम्रो हो ?
सामाजिक रुपमा हेर्न हो भने अवस्य नै घुर्नु नराम्रो हो । यसले अरुलाई रातको समयमा बाधा पु¥याउन र निद्रा बिथोलिदिन सक्छ । स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि घुर्नुलाई राम्रो मानिदैन । यसले स्वास्थ्यमा दुरगामी असर पार्न सक्छ । यसले शरीरमा अन्य समस्याहरु पनि खडा गर्न सक्छ ।
के घुर्ने बानीलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ ?
अवश्य सकिन्छ । यसका लगि डाक्टरबाट विशेष सल्लाह लिन सकिन्छ । यस सम्बन्धी डाक्टरलाई यतयबिचथलनययि(नष्कत भनिन्छ । मुख, घाँटी र नाकको जाँच पछि कस्तो उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्ने थाहा हुन्छ ।
घुर्ने मानिसमा ४० प्रतिशत पुरुष र २५ प्रतिशत महिला रहेका छन् । धेरै उमेर भएका मानिसहरु बेढी घुर्ने गरेको पाइएको छ । ५५ देखि ८५ उमेर समूहमा १÷३ मानिस घुर्दो रहेछन् । घुर्ने बानी हटाउने मुख्य ८ तरिकाहरु निम्न छन्: